Toerana fiarovana any India
Raha mipoitra ny ankizy sy ny olon-dehibe mandritra ny vanin-taona mafana, dia azo inoana fa faly amin'ny fanantenana ny fitsangantsanganana efa antitra. Miaraka amin'ny sekoly sy ny sekoly amidy ho an'ny lohataona, inona no tsara kokoa noho ny mandeha amin'ny vakansy miaraka amin'ny olona mihidy. Tena mahalana ny mandeha mankany amin'ny toerana mafana ao anaty ala. Raha tsy Goa izany! Ny toeram-piantsonan'ny fiaramanidina manerana ny firenena no toerana tsara indrindra hotsidihina amin'ity hafanana hafanana ity.
Ny toerana tsara indrindra hialana amin'ny lohataona dia ny havoana. Mangatsiaka sy mangina, ny hafanana mandritra ny fahavaratra dia tsy manohina anao any ary afaka mankafy ilay reny tsara tarehy ianao amin'ny voninahitra rehetra. Ho an'ny dia lavitra sy miala sasatra dia afaka manomana fitsidihana an'i Lonavala sy Khandala ao Maharashtra ianao. Mahafinaritra sy milamina, ho azonao tokoa ny fialam-boly tadiavinao! Ho an'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviana na ny olon-tianao, ny sasantsasany amin'ny avaratra no safidy tsara indrindra. Ny fandalinana ireo lohasaha midadasika sy mahafinaritra, fividianana, fialantsasatra amam-bika sy làlana dia ny azonao atao eto. Ho an'ny dia misimisy kokoa miaraka amin'ireo namanao na solo, tsara lavitra noho ny lalana mankany Leh Ladakh. Mandeha amin'ny bisikiletanao, mihinana eo amin'ny lalana dhabas, mandinika sy mandeha eny rehetra eny. Inona indray no azonao atao amin'ny vakansy?
Ity lisitra etsy ambany ity dia packages vitsivitsy izay omen'ny Srinagar Tour Package, Best of Kashmir Tours Packages, Leh Ladakh Tour Package, Dia mankany Lonavala - Khandala izay hahatonga ny fanapahan-kevitra momba ny fialan-tsasatra ho mora kokoa. Ataovy azo antoka fa haka ny tsara indrindra ianao! Happy traveling!
Fialofana any amin'ny Himachal
Leh-Ladakh sy Srinagar
Ny hatsaran'ilay vakoka natsangan'ny natiora
Fantaro ny Package Tour Uttarakhand
Himachal miaraka amin'ny tranom-bakoka velona
Mahatalanjona i Himachal
Fialan-tsasatra any Karnataka sy Tamil Nadu